Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya Ma Saaxir baa? Xildhibaan Cabdiraxman Yusuf Cartan |
Dareen Dadweyne oo Xoogle
Dadweynaha Soomaaliyeed oo dareenka si weyn ugu muujiyey banaanbax taageero. Xitaa magaalooyin Somaliland ah baa laga taageeray. Koonfur hadalkeeda daa. Shicibka caadiga ah run ahaantii inay is-beddel u baahan yihiin bay ogaadeen. Qaati billahi bay ka joogsadeen madax musu-maasuq ah. Dadku nabad iyo nolol bay u boholyoobeen. Ifafaalo Madaxweyne Farmaajo ka muuqday ayaa dadka yididiilo geliyey. Sidii madaxweyne dadweyne ayuu u hadlay.
Inuu ciidamada Soomaalida dhisayo, inuu ka maarmayo kuwa shisheeye inuu yaraynayo ama saarayo kuwa shisheeye. Inuu dadka jilicsan nolol u abuurayo, musumaasaq dalka barriinsaday tirtirayo, si taraarax ah midnimada Soomaaliyeed Soo celinayo.
Hiilka kowwas dadweynaha ayaa bixiyey. Hiilka labaad baarlamaanka ayaa noqdey. Beelo gaar ah oo isaga soo cimaamta madaxweynenimda iyo raiisul wasaaranaimada waa laga cadhooday. Waxa kale laga cadhooday sida qaawan ee dalalka shisheeyey ay ugu ololaynayeen qaar ka mid ah murashixiinta haddii, kuwaasi soo bixi lahaayeen kolleyba wixii shisheeyuhu ugu ololaynayeen bay qabaan. Waxa kale oo laga daalay adeegsiga lacagta kursiga lagu korayo. Taasina maanta may shaqayn. Arrimahaa badankoodu Madaxweyne Farmaajo wey caawiyeen.
Haddaba Farmaajo soo baxye yaa u hiil ah?
Dadkaa u hiil ah. Dadku ma awood bay leeyihiin? Miyey u habaysan yihiin, miyey u abaabulan yihiin qaab ay cududoodu ku muujiyaan. Jawaabtu waa maya. Haddii ay sidaas yihiin hiilkoodu waxtar badan maleh, Tan kale cid ay uga hiiliyaanba ma garanayaan? U malayn maayo.
Farmaajo Yaa Cadaw ku ah?
1. Suuqa Bakaaraha ayaa cadaw ku ah, bermuudada muqdisho weeye amse (black hole) aan guntiisa la gaadhayn. Sida la sheegayo cashuurta al-shabaab bay siiyaan. Dawlada kantroolkeeda ma rabaan.
2. Shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ayaa cadaw ku ah – dawlad xoogaysata oo cashuur ka qaadda ma doonayaan, xitaa halkan Somaliland iyadoo aan dhibaato jirin baanay shirkadaha waaweyn cashuur bixin
3. Dalalka deriska ayaa cadaw ku ah – dawlad daciif ah oo iyaga ka amar qaadata way iska rabaan, kumase heshiimayaan sidaas daraaded baanay dawladi u imanayn intay joogaan
4. Al-shabaab baa cadaw ku ah oo iyaga ajandahooda aan la akhriyi Karin. Laakiin ka dagaalamaya in dawladi xamar ka tisqaaddo.
5. Siyaasiyiinta damaca-waalan ee aan xilalka helin baa ka soo horjeeda
6. Maamul goboleedyada haybta ku dhisan baa ka soo horjeeda
7. Fakhriga iyo shaqo la’aanta ayaa ka soo hor jeedo
8. Qaxootiga iyo bara-kaca ayaa ka soo horjeeda
9. Abaaraha soo kordhay baa ka soo hor-jeeda.
Intaas oo cadaw waa kuwo awood badan oo abaabulan oo miskiinka madaxweynaha ah ka soo hor-jeeda. Hiilkiisuna waa kuwa tiro badan oo itaal daran.
Yaa taageersan? Dadweynaha! Laaa ilaaha illalaa.. dadweynuhu haddii ay taageri lahaayeen xaggay ku urursan yihiin. Wanaag bay la jecel yihiin iyo inuu guulaysto. Bes.
Dhibata taageerada dadweynuhu leeyihiin waxay tahay, hiyi-kac bay madaxweynaha ku abuurayaan. Nin kelidii cidla taagan bay leeyihiin dadkaa ku taageersan horuu-soco. Uma jeedaan derbiga shubka ah ee ku hareeraysan. Ilaahay Madaxweynaha Cusub ha u gargaaro.
Yaan wax weyn laga filan, illeyn haddii uu kari waayo dhakhaso ayaa loo niyad jabayaaye.
Ogoobeey hadduu wax kari waayo qaladkiisa maaha. Balse ha dedaalo.